शनिदोष हटाउन शनिबार यी चिज नखानुहोस्
हिन्दू धर्म दर्शन अनुसार हरेक वार भिन्ना भिन्नै देवी देवताको पूजा आराधना गर्न आवश्यक हुन्छ । सातै वार फरक फरक भगवानको उपसना गर्नाले सुख, शान्ति, धन प्राप्ति लगायत हुने धार्मिक मान्यता र विश्वास रही आएको छ । शनिवार शनिग्रहको रूप मानिने शनि देवताको वार हो । हिन्दु धर्म अनुसार शनिबारकी माता कालीमाता हुन् । अझ […]
तपाइँले बाटोमा हिडिरहेको बेलामा पैसा भेट्नु भएको छ ? टिप्नु पनि भएको होला ? यस्तो पैसा भेट्नुलाई कतिले शुभ र कतिपयले अशुभको रुपमा लिने गरेका छन् । भेटिएको पैसालाई कसैले व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कतिपयले भेटिएको पैसा खर्च गर्न नहुने भन्दै धार्मिक स्थलमा दिने वा धार्मिक काम गर्ने गरेका छन् भने केहीले भेटिएको पैसा दान दिने गरेका छन् । हिन्दू धर्म दर्शनको मान्यता अनुसार सिक्का पैसा भेट्नु र नोट भेट्नुका फरक फरक अर्थ रहेका छन् । जमिनमा फेला परेको सिक्का पैसाको सम्बन्ध आध्यात्मिकतासँग छ । प्रतिकात्मक ...
हिन्दू धर्मको महानता - अन्य धर्ममा नास्तिकलाई मृत्युदण्ड, हिन्दूत्वमा संरक्षण !
हरेक धर्मको आफ्नो फरक इतिहास हुन्छ र प्रत्येक धर्ममा भएको कुराले उसलाई अन्य धर्मभन्दा भिन्न गराउँछ । हिन्दू धर्म संसारको प्राचीनतम धर्ममध्येको एक हो । यो पुरानो धर्मसम्बन्धी केही रोचक तथ्य हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं । संसारको जनसंख्यामा हिन्दूहरूको संख्या १३.८ प्रतिशत छ । हिन्दू धर्मको परम्परालाई अघि बढाउन तथा यसको प्रचारप्रसारका लागि धेरै ऋषिमुनिहरूको योगदान छ । यही दिनदेखि ठ्याक्कै यो धर्म शुरु भयो भन्न सकिँदैन । संसारमा सबभन्दा धेरै अनुयायी भएको धर्म क्रिस्चियानिटी हो भने इस्लाम दोस्रो नम्बरमा आउँछ । त्यसपछिको ठूलो धर्म हि...